आफ्नो श्रीमान् वा प्रेमीका बारेमा यी कुरा थाहा छ तपाइलाइ ? - आफ्नो श्रीमान् वा प्रेमीका बारेमा यी कुरा थाहा छ तपाइलाइ ?
आफ्नो श्रीमान् वा प्रेमीका बारेमा यी कुरा थाहा छ तपाइलाइ ?
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २२ जेठ 71 Views
महिलाहरू पुरुषका बारेमा खासगरी आफ्ना श्रीमान् वा प्रेमीका बारेमा आफूलाई सबै जानकारी भएको भ्रममा हुन्छन् तर यथार्थ त्यस्तो हुँदैन । महिलाहरूले पुरुषका बारेमा थाहा पाएँ भनी सोचेका कतिपय कुरा भ्रमपूर्ण हुन्छन् वा ती रहस्यले भरिएका हुन्छन् ।
पुरुषहरूमा इगो धेरै हुन्छ । उनीहरूले मनमनै गल्ती महसुस गरे पनि त्यसलाई बाहिर दर्शाउँदैनन् । पुरुषहरू आफ्नै कुरामा अडिइरहन्छन् तसर्थ पुरुषको इगोमा चोट पुर्‍याउने काम नगरेकै राम्रो हुन्छ । आत्मीय सम्बन्धका लागि महिलाले पुरुषको यस्तो स्वभाव बुझ्नु आवश्यक छ ।
पुरुषहरूको स्मरणशक्ति तीक्ष्ण हुन्छ । यो कुरा सत्य भए पनि विडम्बना के छ भने उनीहरू आफ्नी श्रीमतीको जन्मदिन, उनको रुचिकर खाना, पहिरन, गाना आदि जस्ता कुरा बिर्सन्छन् । उनीहरूले जानीबुझी त्यसो गरेका भने होइनन् । उनीहरूलाई यस्ता कुरा गर्न गार्‍हो लाग्छ ।
पुरुषलाई केवल न्यूज च्यानल, क्रिकेट एवं स्पोर्ट्स हेर्न वा त्यसको चर्चा गर्न रमाइलो लाग्छ भन्नु ठीक होइन । उनीहरू भावनात्मक एवं पारिवारिक टिभी कार्यक्रमहरू पनि हेर्न रुचाउँछन् तर महिलाहरूले छेड नहानून् भन्ने अभिप्रायले आफ्नो मनको कुरा मनमनमै लुकाउन खोज्छन् ।
पुरुषहरू झूटो बोल्छन् भन्ने महिलाहरूको धारणा हुन्छ तर सच्चाइ के हो भने उनीहरू केही कुरा झूटो बोलेरै भए पनि आफ्नी श्रीमती वा प्रेमिका खुसी भएको हेर्न चाहन्छन् ।
पुरुषहरू पनि महिलाझैं असुरक्षित महसुस गर्छन् । यो कुरा पत्याउन मुस्किल भए पनि यथार्थ के हो भने उनीहरूले आफ्नो भावना खुलेर व्यक्त नगर्ने भएका कारण महिलाहरूले त्यसको जानकारी प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।
पुरुषलाई आफ्नो गल्ती, कुनै कमजोरी वा त्रुटिका विषयमा कुरा गरेको मन पर्दैन ।
महिलाका पहिरन, मेकअप एवं हेयर स्टाइलप्रति पुरुषहरू केही हदसम्म मात्र आकर्षित हुन्छन् भने महिलाको व्यक्तित्व एवं आत्मविश्वासबाट उनीहरू बढी प्रभावित हुन्छन् ।
महिलाले आफ्नो दिनभरिको रामायण सुनाउँदा पुरुषहरू वाक्कदिक्क हुन्छन् तसर्थ ठेट कुरा संक्षिप्त रूपमा बताउनु उपयुक्त हुन्छ ।
पुरुषलाई प्रेम प्रदर्शनको मामिलामा महिलाले पहल गरेको मन पर्छ । महिला साथीले हात समाउने, अँगालो मार्ने, आफूलाई मनाउन अनेक प्रयत्न गर्ने, विकेन्डका लागि योजना बनाउने, फोनमा रोमान्टिक वार्तालाप गर्नेजस्ता क्रियाकलाप पुरुषहरू औधी रुचाउँछन् ।
सामान्यतस् पुरुषहरू आफ्ना महिला साथीको पुरुष पार्टनर आफू मात्र भएको रुचाउँछन् । अतीतकै कुरा भए पनि उनीहरू अन्य पुरुषसँग आफ्नी प्रेमिका वा श्रीमतीको प्रगाढ संगत सहन सक्दैनन् । उनीहरू त्यसलाई आफ्नो सानको विरुद्ध हुने मान्यता राख्छन् तसर्थ पुरुषलाई यो मामिलामा भ्रममै रहन दिनु उपयुक्त हुन्छ । आफ्ना अतीतका प्रेमी वा पुरुष साथीका विषयमा कुरा नगर्नु नै वेश हुन्छ ।
पुरुषलाई आफूअनुकूल बदल्ने सपना देखिएको छ भने त्यस्तो सपना देख्न छोड्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ किनभने पुरुषहरू त्यति सजिलै परिवर्तन हुँदैनन् । आफ्नो सौन्दर्य, सीप, व्यक्तित्व, यौनक्षमता आदि जेसुकै प्रयोग गरेर रिझाउन खोजे पनि पुरुषहरू हो मा हो मिलाउनेभन्दा बढी केही गर्दैनन् रआफ्नो बानी पनि सुधार्दैनन् तसर्थ उनीहरू जस्ता छन् त्यस्तै रहन दिनु र त्यही रूपमा अँगाल्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
पुरुषले कुनै कसम खान्छन् भने के बुझ्नुपर्छ भने उनीहरू निराश, थकित वा क्रोधित छन् न कि साँच्चै आफूलाई प्रमाणित गर्न चाहन्छन् ।
पुरुषलाई सरप्राइज असाध्यै मन पर्छ । यो कुरा बुझेर सोहीअनुसार क्रियाकलाप गर्न सके पुरुष पार्टनरलाई खुसी बनाउन कुनै गार्‍हो छैन ।
बढी कुरा गर्ने विषयमा महिलाहरू बदनाम छन् तर पुरुष पनि यो कुरामा पछि छैनन् । विशेष गरी आफ्ना सहकर्मी वा हाकिमका बारेमा कुरा चल्दा पुरुषले महिलालाई पनि माथ गर्छन् ।
प्रायस् पुरुष सपिङप्रति त्यति रुचि लिँदैनन् । उनीहरू बढी मूल्य तिर्नुपरे पनि तयार हुन्छन् तर मोलभाउ गर्दै पसल–पसल चहार्नु उनीहरूका लागि सबैभन्दा दिक्कलाग्दो काम हो ।
आफ्ना श्रीमान् वा प्रेमीले आफूसँग कुरा गर्ने क्रममा कुनै सुन्दर युवतीलाई हेरे भने रिसाउनु बेकार हो किनभने सुन्दर एवं सेक्सी युवतीप्रति आकर्षित हुनु पुरुषको नैसर्गिक स्वभाव हो । यसलाई अन्यथा मानेर कुनै फाइदा छैन ।
पुरुषमा महिलाले जस्तो आफ्ना साथीसँग गम्भीर झैझगडा गर्ने स्वभाव हुँदैन तसर्थ जब श्रीमती वा प्रेमिकासँग झगडा पर्छ उनीहरू निराश हुन्छन् ।
पुरुषहरू रुँदैनन् भन्नु गलत हो । उनीहरू सकेसम्म पीडा सहन्छन् भने आखिरी परे रोइ पनि दिन्छन् । यद्यपि पहिलेका यस्ता कुरा सुनाएको पुरुषहरू मन पराउँदैनन् किनभने उनीहरू आफूलाई कमजोर चित्रण गरेको सहन सक्दैनन् ।
पुरुषहरू महिलाले जस्तो पहिरन छनोट गर्न समय लगाउँदैनन् । उनीहरू आधा मिनेटमै पहिरन छनोट गरिसक्छन् तर कुनै सुन्दर युवतीसँग भेट्न जाँदैछन् भने कुरा अलग हुन्छ ।
पुरुषहरूको कुराकानीको विषय सदैव केटीहरू नै हुन्छन् भन्नु गलत हो । उनीहरू प्रायस् खेल, कार, बाइक, भ्रमण वा शारीरिक तन्दुरुस्ती आदि विषयमा कुराकानी गर्छन् ।
पुरुषहरू बाइक वा कार तीव्र गतिमा चलाउँछन् भन्नु पनि ठीक होइन । छेउमा सुन्दर युवती बसेका बेला उनीहरू तीव्र गतिमा सवारी चलाउँछन् अन्यथा सन्तुलित गतिमा सावधानीपूर्वक सवारी हाँक्छन् ।
पुरुषको मन चलायमान रहन्छ, फलस्वरूप उनीहरू एकसुरमा हुन्छन् । त्यस्तो बेला महिलाले के सोचिरहेका छौं भनी प्रश्न गरे केही होइन भनेर चुप लाग्छन् । हुन पनि उनीहरू केही सोचिरहेका हुँदैनन् । यस्तो बेला उनीहरूको कुरा नपत्याउँदा वा बारम्बार प्रश्न गर्दा उनीहरू रिसाउन सक्छन् ।
पुरुषहरू प्रायस् घरका सामान यताउता छरिदिन्छन्, कोठामा, बाथरुममा वा बैठकमा सामान ठीक ठाउँमा राख्ने कुरा उनीहरूलाई सम्झना हुँदैन । यस्तो बेला रिसाउनु, गाली गर्नु वा हल्ला मच्चाउनुको कुनै अर्थ छैन बरु प्रेमपूर्वक कुरा गरेर उनीहरूको त्यस्तो बानीमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।
पुरुषहरू धोकेबाज हुन्छन् भन्नु ठीक होइन । केही धोकेबाज हुन्छन् भने केही इमान्दार पनि हुन्छन् । सबै पुरुषलाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्नु ठीक होइन । जीवनसाथी चयन गर्नुअघि को कस्तो छ भनेर निक्र्यौल गर्न सक्नु नै आफ्नो बुद्धिमानी हो ।
पुरुषहरूले कुनै पनि बेला टाउको दुखेको, शरीर दुखेको वा अन्य कुनै प्रकारको पीडा भएको गुनासो गरे के बुझ्नुपर्छ भने उनीहरू महिला साथीको साथ खोजिरहेका छन् ।
पुरुषलाई आफ्नो समस्या आफैंले सुल्झाउँदा रमाइलो लाग्छ किनभने त्यसमा पूर्णताको आनन्द हुन्छ । यस्तो बेला उनीहरू श्रीमती वा प्रेमिकाले दिएको सल्लाह रुचाउँदैनन् तसर्थ चुप रहनु नै श्रेयस्कर हुन्छ ।
खाना एवं निद्राझैं सेक्स पनि पुरुषको आवश्यकता हो तसर्थ यसका लागि पुरुषको पहल नपर्खी महिला साथीले पहल गरे भने उनीहरू सर्वाधिक प्रसन्न हुन्छन् । यौनका लागि उनीहरूले पहल गरेका बेला आफूले अस्वीकार गरे त्यो सम्बन्धमा खलल पैदा गराउने पर्याप्त कारण बन्नसक्छ । कारण यौनका लागि कतिपय पुरुष जुनसुकै हदसम्म जानसक्छन् ।
पुरुषहरू स्वादिष्ट खानपानका सौखिन हुन्छन् । उनीहरूको प्रेम प्राप्त गर्न मीठा–मीठा परिकार बनाउन जान्नुले पनि फाइदा पुर्‍याउँछ ।
पुरुषहरू सदैव श्रीमती वा प्रेमिकालाई खुसी राख्न चाहन्छन् । यद्यपि यदाकदा उनीहरू सानातिना गल्ती गरिदिन्छन् । त्यस्तो बेला नरिसाई प्रेमपूर्वक आँखा तर्ने हो भने उनीहरू औधी खुसी हुन्छन् ।
पुरुषहरू सेक्सपछि तुरुन्तै कोल्टो फर्केर निदाउँछन् । त्यतिबेला उनीहरू न प्रेम प्रदर्शन गर्छन्, न धेरै कुरा नै गर्छन् । यस्तो व्यवहारका कारण महिलाहरू चिढिन्छन् र ‘आफ्नो मतलब पूरा भएपछि के छ र, मेरो के वास्ता रु’ भन्नसमेत चुक्दैनन् । यथार्थ के हो भने पुरुषहरूको शारीरिक संरचना नै त्यस किसिमको हुन्छ, सेक्सपछि उनीहरूलाई निद्राले आक्रमण गर्छ । यस्तो समयमा उनीहरूले आफूलाई प्रेम गर्दैनन् भन्नु गलत हो । यस्तो बेला रिसाउनुभन्दा प्रेमपूर्वक स्पर्श एवं प्रगाढ आलिंगनमा बाँधी केही समयपछि पुनस् यौनक्रीडाका लागि तयार पार्न सकिन्छ ।
महिलाजस्तै पुरुषहरू पनि आफ्नो तौल एवं फिगरप्रति संवेदनशील हुन्छन् । त्यसमा आएको सानो परिवर्तनले पनि उनीहरूलाई चिन्तित तुल्याउन सक्छ ।
कतिपय पुरुष स्वभावैले महिलालाई दुस्ख दिने, मारपिट गरेर आनन्द लिने खालका हुन्छन् । त्यसो गर्दा उनीहरूलाई आफू शक्तिशाली भएको महसुस हुन्छ । त्यसैले बारम्बार उनीहरू त्यस्ता क्रियाकलाप दोहोर्‍याउँछन् । आफ्नो पुरुष साथी पनि त्यस्ता छन् भने उनलाई मनोचिकित्सककहाँ लगेर उपचार गराउनुपर्छ । अनेक उपायबाट पनि कुनै समाधान ननिस्किए सम्बन्ध तोड्नुमै भलाइ हुन्छ ।
सेक्स र प्रेममा धेरै फरक छ तर कतिपय पुरुष यसलाई एउटै मान्छन् तसर्थ विवाहअघि प्रेमीसँग यौनसम्बन्ध राख्न हतारिनु हुँदैन । विवाहअघि हुँदैन भन्नु नै उत्तम हुन्छ, स्वीकार गर्दा उनीहरूले धोका दिनसक्छन् वा नराम्रो मान्न सक्छन् ।
ड्राइभिङ गरिरहेका बेला यसरी चलाऊ, उता घुमाऊ, यसरी किन हाँकेको भनी सिकाएको कुनै पनि पुरुषलाई मन पर्दैन तसर्थ यस्तो कुरामा चुपचाप बस्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।
पुरुषहरू बढी नै मुडी हुन्छन् तसर्थ सम्बन्धलाई महिलाले नै सम्हाल्नुपर्छ । सम्बन्ध टुटिसकेपछि जोड्न उपन्यास तथा चलचित्रमा मात्र सहज हुन्छ, वास्तविक जीवनमा होइन । यथार्थमा टुटेको सम्बन्ध जोड्न निकै कठिन हुन्छ ।
पुराना विचारका पुरुषलाई रेस्टुराँको बिल आफैंले तिर्न मन लाग्छ तर हिजोआजका केटाहरू केटीले बिल तिर्दा वा बाँडेर तिर्दा औधी खुसी हुन्छन् ।
२०७५, २२ जेठ